काठमाडौं । भ्रष्ट मानिसले पनि सबैसँग घुस रकम लिदैन । को मार्फत लिने भन्ने उसका आफ्नै विश्वास पात्र दलालहरु हुन्छन् । कांग्रेसका नेता चिरिञ्जीबी वाग्लेले छोरा देबेन्द्र वाग्ले मार्फत रकम उठाउने गरेका थिए । त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नोना भाउजु र सुजाता कोइराला मार्फत घुस रकम लिने गर्दर्थे । सुगतरत्न कंसाकारले नेपाल एयरलाइन्सको जिएम बन्न मन्त्री कृपासुर शेर्पालाई मोलतोल मिलाउने जिम्मा पर्यटन व्यवसायि आङ छिरिङ शेर्पालाई दिएका थिए ।
हुने नहुने सबै काम गर्नका लागि डिल गर्ने गरी घुस र कमिसन रकम जम्मा गर्न नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले आफ्नै सहोदर भाइ मार्फत काम गर्ने गरी सेटिङ बनाएकी छन् । उनले ठूलो कमिसन रकम सिंगापुरमा रहेको श्रीमान् दिगम्बर राजभण्डारीको खातामा जम्मा गर्न लगाएपनि एक÷दुई करोड रुपैया भने भाइ मार्फत लिने गरेकी हुन् । उनले आफ्ना पुराना विश्वास पात्रहरु समेत दिन प्रतिदिन संस्थाको हीतमा लागेर उनका अनियमित्तताको विरुद्धमा लागेर मिडियामा समाचार दिएको भन्दै भाइलाई कमिसन दलाल बनाएकी हुन् । स्रोतका अनुसार जुनसुकै फाइल अघि बढाउनुपर्दा पनि भाइसँग कुरा मिलाएर आउनु भन्ने गरेको एक जना सप्लाएरले डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकलाई बताए ।
आप्््््््््््््््््््mनो विरुद्धमा लागेका भन्दै एक पछि अर्का कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवा गर्दैमा दिन फाल्ने गरेकी उनले हालसम्म पनि एउटा नयाँ स्किम ल्याउन सकेकी छैनन् । प्रवन्ध निर्देशक बनेको नौ महिनाको अवधिमा अन्तराष्ट्रिय आगमन कलमा मात्रै पाँच अर्व रुपैया माइनसमा रहेको भएपनि उनलाई कसैले औला ठड्याएका छैनन् । विज्ञहरु जानुपर्ने अवलोकन भ्रमणमा उनी श्रीमान् र छोरा लिएर नेपाल टेलिकमको खर्चमा ब्रम्हालुट मच्चाएकी छन् । यसरी चीन भ्रमणमा जाने उक्त टोलीमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकमकका पदेन अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ, कामिनी राजभण्डारी, श्रीमान् दिगम्बर राजभण्डारी, कान्छा छोरा रीना डंगोल, शिवराम टुई टुई, राधाकृष्ण, ढुंगेल, अनन्त मल्लिक, निरज राजबंशी लगायतका जम्बो टोली थिए । टोलीको नेतृत्व गरेकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले श्रीमान् दिगम्बर राजभण्डारीलाई भने कमिसन जम्मा गर्ने जिम्मा लगाएकी थिइन् । यसरी अनाआवश्यक भ्रमणका कारण दैनिक गर्नुपर्ने अत्याआवश्यक काम पनि रोकिएको टेलिकमकै कर्मचारीहरुले बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धि कम्पनी एनसेललाई भन्दा छ महिना अगावै फोरजी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भएपनि थ्रिजीको स्पीडको सेवा सञ्चालन गरेर १सय २५ करोड रुपैया खर्च गरिएको छ । बिना टेण्डर नेपाल टेलिकमको विनियममा टेकेर दिइएको उक्त सेवा सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलापमा रहँदा रहँदै पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसञ्धान आयोगमा समेत सेटिङ मिलाएका कारण हालसम्म कार्वाही हुन सकिरहेको छैन ।
टेलिकमको वेबसाइटमा लेखिएको छ– इन्ज्वाय द इन्टरनेट एट मोर देन थर्टी अर्थात तीस एमबीपीएस स्पीड फोरजी । तर सर्वसाधारण सेवाग्राहीले समेत त्यो स्पीड चेक गर्दा टेन अर्थात दस एमबीपीएसभन्दा बढी आउँंदैन । स्रोतका अनुसार, अन्य देशहरुमा फोरजीका लागि फोरटी अर्थात चालीसभन्दा माथि एमबीपीएस उपलब्ध हुन्छ । हालै सुरु गरेको एनसेलको स्पीड टेलिकमको भन्दा निकै बढी देखिएको छ । यसरी टेलिकमको फोरजी वास्तवमा थ्रीजी नै हो भन्ने स्रोतको दाबीलाई सबै प्राविधिकहरुले स्वीकारेका छन् । अनि फोर जी सञ्चालनका नाममा खर्च गरिएको एक अर्ब पच्चीस करोड रुपैयाँं कहाँं गयो ?
टेलिकम उच्च स्रोतका अनुसार, सन् २०१६ जुलाई १४ तारिखमा नेपाल टेलिकममा नायब प्रबन्ध निर्देशक सूर्यभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको एक कमिटीले जसमा तत्कालीन सीटीओ कामिनी राजभण्डारीसहितले निश्चित बुँदासहित कुन कुन सेवा शर्त पूरा गरेमा मात्र हुवावे टेक्नोलोजीजसँग फोरजीको निश्चित लाइन क्षमता बिना टेन्डर खरिद गर्न सकिन्छ अन्यथा खरिद गर्न हुँदैन भनी प्रतिवेदन समेत पेस गरेको थियो राजभण्डारीले स्वयं सीटीओ हुँदा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भएका कन्डिसनहरुलाई लत्याएर प्रबन्ध निर्देशक हुनासाथ हुवावेसँग करिब चार–पाँच गुणा महँगोमा बिना टेन्डर फोरजी सेवा किन खरिद गरिन् ? के यस यथार्थले नै करोडौं घोटालाको भण्डाफोर गर्दैन ? स्रोतको प्रश्न छ । सो प्रतिवेदन झिकाएर त्यसका उल्लेखित बुँदाहरु के के पूरा भए र कसरी फोरजी सेवा खरिद गरिएको अख्तियारले छानबिन गरेमा राजभण्डारी को अनियमितता छर्लङ हुने स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार, सन् २०१७ मै फोरजीको नाममा थ्रीजी इन्हेन्स सर्भिस खरिदमा अनियमितता गरिएको भन्दै अर्को सप्लायर कम्पनी जेडटीईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी दिएको थियो । सन् २०१७ मा पछिल्लो सम्झौता २०१२ बमोजिमको दररेटमा थ्रीजी इन्हेन्समेन्ट प्रयोजनका लागि बीटीएस कार्डस्हरु र फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि सफ्टवेयर तथा लाइसेन्स खरिद गरिएको स्रोतले बतायो । जस अन्तर्गत पोखरा र काठमाडौंमा ३८७ वटा बीटीएसहरुमा थ्रीजी इन्हेन्समेन्ट कार्डस् अपग्रेड गरिएको र लाइसेन्स तथा सफ्टवेयर लोड गरेर फोरजी सेवा चलाइएको स्रोतले खुलासा गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार, यदि वास्तवमै फोरजी सेवा बराबरको क्षमता ग्लोबल टेन्डर मार्पmत खरिद गरिएको भए सन् २०१२ को तुलनामा सस्तोमा फोरजी सेवा आउने थियो । जसमा सम्पूर्ण नेटवर्क कम्पोनेन्ट्स कोर÷एमएससी, बीएससी÷बीटीएस, टावर÷एन्टेना÷पावर समेत खरिद गर्न सकिने थियो । तर कमिसनको खेलमा टेलिकमलाई धराशायी बनाउने कार्य भयो । यसरी फोरजी घोटालाको धमिराले नाफामूलक टेलिकमलाई ढलाउन लाग्दा पनि अधिकार सम्पन्न सबै जिम्मेवार निकाय किन मौन छन् ? टेलिकमका इमानदार कर्मचारी यो प्रश्न गर्छन् । भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने राजनेताहरु तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको ठूलो ठूलो प्रतिबद्धता के सत्ता र अधिकार पाउने शब्दाडम्बर मात्र हो ? होइन भने टेलिकमलाई आयस्रोतको उचाइमा लाने फोरजी सेवा एनसेलको पोल्टामा हाल्ने टेलिकमका आत्मघातीहरुलाई दण्डित गर्न किन कोही अगाडि सर्दैनन् ?
नेपाल टेलिकमको दीर्घकालीन आम्दानीको मेरुदण्डका रुपमा रहेको मोबाइल सेवाको निर्देशनालयका अत्यन्त अनुभवी, दक्ष र इमानदार कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अनुभवै नभएका कर्मचारी ल्याएकी छन् । जथाभावी सरुवाबाट करिब करिब सबै डिएमडी असन्तुष्ट र हतोत्साही भएर कार्यालयमा निरन्तर नआइरहेको अवस्था छ, सबै विभागको कार्य अस्तव्यस्त रहेको कर्मचारीले बताए ।
नौ महिनामा कहाँ चुकिन् कामिनी राजभण्डारी ?
० अनियमित्तता र भ्रष्टाचार गरेका कारण विरोध गर्ने र पदमा टिक्न गाह्रो भएका कारण युनियनका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको बढुवा गराई मुखमा बुझो लगाउने काम गरेकी ।
० सस्था धारासायि बनाएको विषयमा कुरा उठाउने कर्मचारीहरुलाई अमेरिका भ्रमणमा लैजाने आश्वासन दिने गरेको ।
० विज्ञता अनुसारको ठाउँमा सरुवा नगरी काखा र पाखा गर्ने गरेको । लामो समय देखि एकै ठाउँमा बसेर अनुभव हासिल गरेका बरिष्ठ कर्मचारीहरु पनि प्रतिशोधपूर्ण सरुवाको चपेटामा ।
० जीएसएमए एम डब्लु सी सांघाइले एक्सपर्टहरुलाई टेलिकमका नयाँ उत्पादनहरुको जानकारी दिने उद्देश्यले बोलाइएको निमन्त्रणामा एक्र्सपर्टहरु भन्दा पनि आफ्नै श्रीमान् र छोरालाई लिएर मोजमस्तीमा रमाउन लागिन् । यसरी चीन भ्रमणमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकमकका पदेन अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ, कामिनी राजभण्डारी, श्रीमान् दिगम्बर राजभण्डारी, कान्छा छोरा रीना डंगोल, शिवराम टुई टुई, राधाकृष्ण, ढुंगेल, अनन्त मल्लिक, निरज राजबंशी लगायतका जम्बो टोली थिए । टोलीलाई प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले श्रीमान्लाई लगाएर कमिसन जम्मा गरेकी । जस्का कारण अत्याआवश्यक काम पनि रोकियो ।
० व्यवस्थापन प्रमुख राजभण्डारीले कमिसन खाएर नेपाल टेलिकमको गुणस्तर खस्काउँदै र एनसेलको झनै राम्रो बन्ने अवस्थाको सिर्जना गराएकी । जसका कारण नेपालका पहाडी भागमा टावर नै नराखेका कारण टेलिकमको नेटवर्क नटिप्ने गरेको कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा युवाहरु बाहिरिएको कारण उनका घर परिवारले एनसेलको सिम किन्न बाद्य भएका छन् ।
० हुवावे र जेटीइले समान सप्लाई गर्दा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीलाई बढि कमिसन दिन परेका कारण भन्दै नक्कली र सस्तो सामानहरुको सप्लाई गरिदिने हुँदा गुणस्तरमा दिन प्रतिदिन कमसल हुँदै गएको ।
ं ० असक्षम व्यवस्थापनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कलमा नोक्सानी हालसम्म पाँच अर्व ।
० संस्थाका पक्षमा काम गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीहरुसँगको टसलका कारण कतिपय नीतिगत निर्णयमा एकल र स्वच्छचारी निर्णय ।
० अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्धय बैकुण्ठ अर्याल र कृष्ण ज्ञावलीले बनाएको नेपाल टेलिकम सम्बन्धी पुनःसंरचनामा बरिष्ठ डिएमडीहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै राखेर काम दिनुपर्ने भन्ने रिपोर्टलाई लत्याउँदै बाहिर क्षेत्र र जिल्लामा लगेर अपमानजनक रुपमा प्रतिशोध साधेर सरुवा गरिएको ।
० नेपालकी राष्ट्रपति विद्या देबी भण्डारीको तलब १ लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैया तर टेलिकमकी प्रमुख कामिनी राजभण्डारीको चाहिँ दुई लाख तलब, घर भाडा २५ प्रतिशतले जम्मा पचास हजार, भैपरि आउने खर्च २५ प्रतिशतले मात्र ५० हजार अन्य सुविधाहरु रहेका छन् । तथापि संस्थाका पक्षमा हीत हुने खालको एउटा पनि काम गरेकी छैनन् ।
० एक वर्षमा ४७ अर्व कमाई गर्ने भनिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय कलमा मात्रै पाँच अर्ब नोक्सानीमा तथापी कतैबाट राजीनामाको आवाज उठेन ।
० हुवावेकै पैसामा स्पेनको राजधानी वार्सिलोना भ्रमणमा जादा समेत नेपाल टेलिकमबाट पनि भ्रमण भत्ता लिएकी थिइन् । यसरी उनले सप्लायर कम्पनी हुवावेसँग भ्रमण खर्च र टेलिकमबाट पनि सुविधा लिएको थिइन् । भिषा लगाउन जाँदा कमिसन लेनदेन नमिल्ने ठाउँमा भएकाले टेलिकमको व्यवस्थापनले दिल्लीमा बस्नका लागि बुक गरेको पाँच तारे होटलमा व्यर्थै खर्च गरी अन्यत्रै बसेकी थिइन् ।
० पाँच अर्वमा एनसेलले फोरजी सेवा दिने तर टेण्डर खोलेर काम लाग्ने पुरानै संरचनामा केबल सफ्टवयर मात्रै किने पुग्नेमा पुरै नयाँ बनाएर लाग्ने टेण्डर खोल्ने बोर्डमा लगेर टेण्डर खोल्ने सुरसारमा । जसबाट ३१ अर्व रुपैया खर्च लाग्ने देखिन्छ । कसरी पुर्ति हुन्छ त्यो रकम ?
० २०७३ असोज १० गते द.न.७२६०, २०७३ कार्तिक २३ गते द.न. ९५०१, २०७३ मंसिर १२ मा द.न. १०३५६, २०७३ पौष ६ गते द.न.११५४७, २०७३ फाल्गुन ८ गते द.न. १५१०७ मा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपनि प्रवन्धक प्रदिप ठाकुरले नै अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई मिलाएको दाबी ।
० फोरजी भन्दै थर्टि एमबिपिएस भनिएपनि थ्रीजी पनि नभएको दूरसञ्चारका प्राविधिक कर्मचारीद्धारा जानकारी ।
० कर्मचारीहरुसँग घरमै श्रीमान्सँग गरेको जस्तो झगडा गर्ने गरेको । जसका कारण संस्थाका सभेच्छुकहरुलाई चिन्तित बनाएको ।
० नौ माहिनाको सूचांक परै माइनसमा ।
० टेलिकमले ७८ अर्व रुपैया नबिल, ग्लोबल लगायतका बैकमा राखेको रकमको बैंकिङ तरलताका कारण बढि व्याज प्राप्त गरेका कारण नाफा देखिएपनि अन्य सबै सुचांक माइनसमा । साथै डलर खाताको पनि त्यही अवस्था रहँनु ।
० नेपाल टेलिकमको विनियमको धारा ९ ‘क’ अनुसार सन्तोषजनक काम नगरेको प्रबन्ध निर्देशकलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीले पदबाट हटाउनेछन् । तर पनि अहिलेसम्म कतैबाट कुनै कारवाही नहुनु र एक शव्द पनि नबोल्नु आश्चर्यजनक । —२०७४ असार २६ गते सोमबार काठमाडौंबाट प्रकाशित डायरी एक्सप्रेसबाट साभार